TRA-BOINA TAO AMIN’NY INFP Niverina eny an-tranony ny sasany
“Telle mere, telle fille”
Mbola hatramin’ny 25 mey ho avy izao no hanarahinao
Firy taona eo vao matotra ara-pitiavana ny lehilahy ?
Sanda Ranaivosoa, mpitendry gitara : Raha ny fahitàko azy dia rehefa tena hoe : tia vehivavy iray mitovy fijery aminy (vision)
Ankoatra ny fampifandraisana bebe kokoa ny reny sy ny zanany vavy dia misy koa ny fanomezana ho azon’ireo mpandray
Mitohy anio ny fanarahana ny sarin’ireo mpandray anjara amin’ity fifaninanana hanehoana ny
« Telle mère, telle fille » Sary maneho fa « complices » i Neny sy ny zanany
Nanomboka ny 8 mey lasa teo ilay fifaninanana « Telle mere, telle fille » vohizin’ilay vondrona « Vehivavy Manambady » ao amin’ny Facebook.
Ra-Marie, manana « don » mampipetraka zaza …tena marina ve ? Ra-Marie, mpanotra : Manana « don », masera no namporisika azy !
Isan’ireo fomba malagasy mbola betsaka mpanao amin’izao fotoana ny miotra rehefa misy tsimetimety. Isan’ireo manana fanomezam-pahasoavana amin’izany i Razanamalala Marie Jeanne na Marie, mpanotra eny Amboanjobe.
67 HA Nadoboka eny Antanimora ilay vehivavy mpanendaka
Tovovavy iray, 16 taona no voahendaka teny amin’ny faritra 67ha iny ny zoma 22 Martsa lasa teo, tokony ho tamin’ny 11 ora maraina.
Afak’omaly ny fotoana farany natokana hijanonan’ireo traboina nianjeran’ny vato teo Tsimialonjafy nanomboka ny 19 janoary sy Ambanin’Ampamarinana ny 3 febroary teo amin’ny ivon-toeram-piofanan’ny INFP Mahamasina.
Maro amin’ireo naratra na havan’ny maty sy ireo tandindomin-doza no tapa-kevitra hiverina eny amin’ny trano fonenany izay lazaina fa faritra mena. Tsy vitsy koa ireo nihazo ny fianakaviany any an-toeran-kafa. Azo isaina amin’ny ratsan-tanana ny tra-boina no nisafidy ihazo ny ivon-toerana “Village Voara ”. Raha ny filazan’izy ireo dia hisy fampirantiana matetika eny ka na tsy esorina eo Andohatapenaka aza izy ireo mandritra ireny hetsika ireny, hiteraka fahasahiranana ho azy ireo izany, tahaka ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana. “Raisinay ho adidy ny mivezivezy amin’ireo toerana mety hahazoana ilay fampanantenan’ny Fanjakana tany na trano fonenana maharitra . Manatona ny toby fandraisana tra-boina Andohatapenaka ihany koa izahay fa sao misy fifandaminana vaovao ka tsy hahazo ilay tany sy trano nampanantenain’ny fitondram-panjakana izahay. Ezahanay ny mandalo isan’andro eny Ambanin’Ampahamarinana, satria mbola ao an-tranonay ao daholo ny fanaka sy ny kojakoja ary ny entanay. Manana taratasy ara-dalana “juridique” amin’ny tany sy ny taratasy fahazoan-dalana nananganana ny trano eo Ambanin’Ampamarinana mantsy izahay ka manara-maso akaiky ny fandaminana izany na avy eny amin’ny “Village voara” na ny avy eo amin’ny fokontany fa ny efa any tany anaty lisitra izahay.” Hoy i John Fabien Andriandrafimparany, raim-pianakaviana iray nipetraka teo Mahamasina nandritra ny herinandro maro. Nilaza izy fa any amin’ny havany no ipetraka fa tsy ihazo an’Andohatapenaka. Nanambara anefa ny tomponandraikitry ny toerana eo amin’ny INFP fa afaka mandefitra ihany izy ireo raha mbola tsy mazava ny trano fonenan’ireo tra-boina, saingy hisy fetrany izany fangorahana izany. Tsahivina hatrany fa ny Fitondrana foibe no ambaran’ny Prefektioran’ny polisy sy ny manam-pahefana eo amin’ny kaominina sy eny ifotony fa tomponantoka amin’ny vahaolna maharitra ho an’ireo tandindomin-doza eo Mahamasina .